सुजिता हत्या प्रकरण : बाबु कामेश्वरसहित थप तीनजना पक्राउ, यस्तो छ हत्याको कारण ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशसुजिता हत्या प्रकरण : बाबु कामेश्वरसहित थप तीनजना पक्राउ, यस्तो छ हत्याको...
सुजिता हत्या प्रकरण : बाबु कामेश्वरसहित थप तीनजना पक्राउ, यस्तो छ हत्याको कारण !
जनकपुरधाम । महोत्तरीकी सुजिता हत्या प्रकरणमा बाबु कामेश्वर पाण्डेयसहित थप तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सुजिता हत्यामा संलग्नता देखिएपछि बाबु पाण्डेयलाई पक्राउ गरेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पाण्डेयसहित सुजिताकी नन्द ३५ वर्षीया अञ्जु ठाकुर र स्थानीय प्रमोद मण्डललाई पक्राउ गरेको हो ।
सुजिता ठाकुर हत्यामा उनका बाबु पाण्डेयकोसमेत संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए ।
एसपी आचार्यका अनुसार बाबु पाण्डेयकै संलग्नतामा देबर रुपेश ठाकुरले सुजिताको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
जेठ २० गतेदेखि महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–७ भम्ररपुराकी सुजिता ठाकुर बेपत्ता थिइन् । कहीँकतैबाट पनि सुनुवाई नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा साउदी रहेका सुजिताका भाइ जितेन्द्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिदीको घर पक्षले नै हत्या गरी खेतमा शव गाडेको आरोप लगाए ।
उनले सुजिताका पाँच वर्षीय छोरा रौनकको एउटा भिडिओ पनि सार्वजनिक गरे । त्यो भिडिओमा ती बालकले आमाको हत्या हजुरबुवा, बुवा र काकाले गरेको बताएका छन् । सुजिताको खोजतलासमा प्रहरीले कुनै चासो नदेखाएपछि साउदीबाट नै भाइ जितेन्द्रले जनकपुरका सामाजिक अभियन्ता सरोज रायलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए ।
रायले घटनाबारे थप बुझ्न शुक्रबार सुजिताका माइती रतौली पुगेका थिए । उनले सुजिताका बुवा कामेश्वर, आमा र दुई कान्छा भाइ आकाश र शिवमलाई भेटेर घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि शनिबार अभियन्ता रायले प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई भेटेर घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रहरीले जाहेरी लिएको तथा सुजिताका श्रीमान र देवरलाई पक्राउ गरिएकाले घटनाको अनुसन्धान हुनेमा स्थानीय बासिन्दा आशावादी देखिएका छन् ।
Previous articleपाकिस्तानले भारतविरुद्ध अगस्त ५ लक्षित षड्यन्त्र बनाएको खुलासा
Next articleसिरहाबाट लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ